Author Topic: Nikhil Upreti (Nepali Actor) (Read 40147 times)
Do you remember the first shot of your first film?
- I don’t remember the scene but I was really very excited in that day.
Among all your films, which film is close to your heart?
- The film that is very close to me is Pinjada and Savadhan.
Which role in the movie you played satisfied you most?
- I am mostly satisfied with the role in Hami Teen Bhai and Savdhan.
- My favorite directors are Shiva Regmi and Tulshi Ghimire.
After you entered in the film industry, you have achievedalot but is there anything that you have lost?
- Well, I have achievedalot rather than losing. The love of my viewers is priceless for me.
How do you take politics as?
- I amacivilized citizen of this country, so I do have proper knowledge of politics. I don’t findasingle politician who isn’t corrupt; every politician just think about themselves rather than the country. Now, the future of our country is in the hand of the new generation.
- I don’t have any favorite till now.
As an artist how would you define Pokhara as?
- It’s reallyavery beautiful place; I am in love with Pokhara and have made up my mind to settle here so I am looking foraland.
Would you like to shareafew words about your upcoming movie?
- It’safamily drama and the film is nicely scripted.
- I am quite busy at work so don’t get any leisure, though if by chance I get one then I would like to sleep.
And lastly what would you like to say to your well-wisher?
- I would like to thank them for loving and appreciating me.
Gossip with Bhupal Gurung, Pokharacity.com
देश सङगठित भए पो विघटनको खतरा : निखिल उप्रेती
निखिल उप्रेती नेपाली चलचित्रका व्यस्त नायकहरुमध्ये एक हुन् । उप्रेतीलाई बौद्धिक कलाकारका रुपमा चिन्नेहरुको पनि कमी किन पनि छैन भने उनी सुटिङबाट फुर्सद पाएका बेला वरपर साथीभाइलाई भेला पारेर जीवन, जगत्, राजनीति र संसारका विविध विषयका बारेमा छलफल गरिरहेका भेटिन्छन् । अझ आध्यात्म त उनको छलफलको रुचिको विषय हो । हामीले यसपटक उनीसँग देशको राजनीतिदेखि उनको व्यक्तिगत जीवन हुँदै आध्यात्मिक विचारसम्म जान्ने प्रयत्न गरेका छौँ । अच्युत कोइराला र जनक तिमिल्सिनाले गरेका कुराकानीका मुख्य अंशहरु :
जागरुक नागरिकको हिसाबले देशको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?
अहिलेको देशको यो अवस्था देखेर मलाई ज्यादै दुःख लागेको छ । मेरो कामलाई हेरेर सिक्ने मेरा दर्शकहरु हुनुहुन्छ, ती दर्शकप्रति मेरो पनि जिम्मेवारी छ । तर, ती मेरा दर्शकहरुप्रति देशका नेताहरुले 'जनता' भन्दै पटकपटक ठग्ने काम गर्छन् र त्यो देख्दा मलाई दुःख लाग्छ । देशको यो अवस्था भएको कारणचाहिँ राष्ट्रप्रति माया नभएकाले नै हो । उनीहरुलाई पार्टीको मात्र सरोकार छ । जनताप्रति सरोकार छैन । उनीहरुको सरोकार भोटसँग मात्र छ ।
भनेपछि अहिलेका दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् त ?
बिल्कुलै छैनन् । यदि मेरो उद्देश्य मेरी आमालाई सुख दिने हुन्छ र मेरा अन्य ४-५ दाजुभाइको उद्देश्य पनि आमालाई सुख नै दिन्छु भन्ने हुन्छ भने त्यहाँ प्राथमिकता मिलेर सुख दिने हो । त्यसका लागि लडाइँ-झगडा गरेर हुँदैन । शान्तिपूर्वक छलफल हुन्छ र त्यो छलफलपछि आमाले सुख पाउनुपर्छ । हामी ४ जनाको सपना नै आमालाई सुख दिने हुन्छ भने त्यो सुख हामीले किन दिन सकेका छैनौँ भने त्यसमा हाम्रो स्वार्थ छ । यदि कसैले स्वार्थका लागिमात्र राजनीति गर्छ भने हामीले उनीहरुलाई किन राम्रो भन्ने ?
तर राजनीतिक ददलहरुको सिद्धान्त नै अलग­-अलग भएपछि कुरा कसरी मिल्छ र ?
हो ! त्यै भएर म के भन्छु भने उनीहरुको उद्देश्य जनतालाई सुख दिने होइन कि राजनीतिमात्र गर्ने हो । उनीहरुले राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनताका लागि काम गर्ने भइदिएका भए यस्तो स्थिति आउने थिएन । जनताका प्राथमिक आवश्यकतामाथि पनि राजनीति गरिदिँदा अहिले यस्तो स्थिति आएको हो । वाद मात्रै पकडेर बस्ने कि जनताका आवश्यकतामाथि पनि विचार गर्ने ? वादभन्दा माथि देश छ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ । दलहरु देशप्रति गम्भीर छँदै छैनन् । अहिले बनेको उच्च राजनीतिक संयन्त्र पनि जनतालाई ढाँट्ने मेलो हो । त्यसबाट केही हुनेवाला छैन ।
अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाइरहेको सीमासम्बन्धी कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
उनीहरु सरकारमा हुँदा त्यही कुरा नदेख्ने, सरकारबाट बाहिरिएपछि देख्ने ? पहिले पनि यी समस्या थिए, खै त समाधान भएका ? खोई कुरा उठाइएका ? मलाई सीमाभन्दा पनि जरुरी त घरभित्रको षड्यन्त्र ठूलो कुरा लाग्छ । घरभित्रै तपाईंहरुबीच मिलाप छैन भने बाहिरियाहरुले त्यसको फाइदा नलिने भन्ने कुरा त छैन नि ! त्यो फाइदा नदिनका लागि सुरुमा घरभित्र मिल्नुपर्‍यो अनि बाहिर बार्गेनिङ गर्नुपर्‍यो । हाम्रा नेता कमजोर भएर तपाईंको कृपा चाहियो भन्न गएका कारण यस्तो भएको हो ।
त्यसोभए नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ त ?
जब राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता एक ठाउँ नआउञ्जेल र वाद, अपवादभन्दा माथि देश ठूलो कुरा हो भन्ने नसोचुञ्जेलसम्म यो देशको भविष्य मचाहिँ राम्रो देख्दिनँ । डरलाग्दो भविष्य देख्छु । केही पनि भन्न सकिने अवस्था छैन ।
भन्नाले देश विघटनको अवस्था देख्नुहुन्छ ?
विघटन हुनका लागि सङ्गठित हुनुपर्‍यो नि ! देश नै टुक्राटुक्रा भइसकेको अवस्थामा विघटनको कुरा नै हुँदैन । देशमा आज तपाईं खुलारुपले आफ्नै गाउँतिर जान नसक्ने स्थिति भइसक्यो । योभन्दा दुःखको अवस्था के हुनसक्छ ? रोजगारी छैन, ऋणैऋणले देश डुबिसकेको छ । भिखारीको पनि के विघटन हुन्छ ?
भनेपछि अब लामो समयसम्म यस्तो स्थिति रहिरहन्छ ?
विचार परिवर्तन गरेनन् भने यस्तै होला भनेर भन्न सकिन्न ।
भनिन्छ, सङ्क्रमणकालमा दूरदर्शी नेताको जन्म हुन्छ, तपाईं यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि सङ्क्रमणकाल भनेको देश पीडामा पर्नु हो र देश पीडामा पर्नु भनेको त्यहाँका जनता पनि पीडित हुनु हो । तर, यहाँ त म त्यस्तो मान्छे नै देखिरहेको छैन, जसले यो पीडाबाट मुक्ति देओस् । पुरानै विचारले जितेको अवस्था छ यहाँ किनभने पुरानाको सङ्ख्या बढी छ । यस्तो भनेर मैले सम्भावना भएका व्यक्ति नै छैनन् भन्न खोजेको होइन तर म तिनीहरुको नाउँ लिन किन चाहन्न भने भोलिका दिनमा मैले नाम लिएका व्यक्तिले पनि काम गरेनन् भने मैले बोलेको खेरै जाला ।
जस्तो नेपाल, उस्तै फिल्म उद्योग भन्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
हेर्नुस्, नेपालको हालत जबसम्म राम्रो हुँदैन, तबसम्म देशका अन्य क्षेत्रको स्थिति राम्रो हुन्छ भन्नु मूर्खता हो । तर, कम्तिमा हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौँ, दर्शकहरुलाई सन्देश दिइरहेका छौँ, मनोरञ्जन दिइरहेका छौँ । त्यसैमा मलाई सन्तोष छ किनभने हामीले कसैको कुभलो गरिरहेका छैनौँ ।
उसो भए नेपालमा चाहिँ के राम्रो छ त ?
हेर्नुस्, अहिले देशको स्थिति हेर्दा कसैको स्थिति राम्रो भएको छ भने त्यो पार्टीहरुको राम्रो भइरहेको छ । उनीहरुले जे चाहेका छन्, त्यो भएको छ । देशमा आन्दोलन बडो गज्जबसँग भइरहेको छ । रोड जस्तोसुकै भए पनि पजेरो आइरहेकै छन् । जे घोषणा गरे पनि भयो, जे बोले पनि भयो ।
तपाईं प्रधानमन्त्री भएको भए प्राथमिकता के हुन्थे ?
कुन प्वाइन्टमा हाम्रो मिलनबिन्दु हुनसक्थ्यो भनेर म खोज्थेँ । मलाई कुर्सीको कुनै सरोकार छैन भनेर काम गर्थेँ । कुनै व्यक्ति विशेषको नाम नलिउँ तर यदि नेपालको प्रधानमन्त्री भएर राम्रो काम गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने ऊ सत्ताच्यूत हुन्छ । त्यसलाई त्यहाँबाट निकालिन्छ । त्यसैले अधिकांश व्यक्ति सत्ताबाट बाहिरिन चाहँदैन ।
अर्को विषय प्रवेश गरौँ । तपाईंलाई अहिलेसम्म आफूले गरेका कुन ३ वटा कामप्रति सन्तोष लाग्छ ?
हेर्नुस्, म राम्रो काम गर र बिर्स भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । त्यसैले मैले कतिवटा राम्रो काम गरेँ भनेर गनेर बसेँ भने त्यो कामको महत्त्व हराउँछ । आज अलिअलि पैसा कमाएपछि स्कलरसीप सुरु गरिदिएको छु । हिजोका दिनमा बियर-सियर खाइन्थ्यो तर हिजोआज त्यो छाडेपछि बचेको पैसाले केही गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो र मैले मेरो गाउँमा स्कलरसीप सुरु गरेँ । यसका कारण ४ जना विद्यार्थीले वर्षभरि निःशुल्क पढ्न पाइरहेका छन् ।
तपाईं र सहकलाकारबीच प्रायः उति जम्दैन, झगडा परिरहेको हुन्छ । खासमा किन यस्तो भएको ?
म कसैलाई बटरिङ गर्दिनँ, म पद हेरेर बोल्दिनँ र सानो मान्छेलाई पनि उत्ति नै महत्त्व दिन्छु, जति ठूलो भनिने मान्छेहरुलाई दिन्छु । अनि म स्पष्ट कुरा गर्छु र धेरैलाई यो मनपर्दैन । त्यही भएर धेरै व्यक्तिहरुसँग मेरो कुरा मिल्दैन ।
सञ्चिता लुइँटेलजीसँग जुन कुरा बाहिर आइरहेको छ, खास कुरा के हो ?
ऊसँगको सम्बन्धका बारेमा जे लेखिएका छन्, ती आधा सत्य हुन् । एउटा पत्रिकाले म र सञ्चिता पशुपतिनाथको मन्दिर गयौँ भनेर लेख्यो तर त्यहाँ मेरा परिवारबाहेक फिल्म उद्योगका अरु केही व्यक्तिहरु पनि थिए भन्ने कुराचाहिँ लेखिएनन् । अब सञ्चितासँग मेरो कुरा मिल्छ, हामी हाँस्छौँ, बोल्छौँ भने त राम्रो कुराका रुपमा पो लिनु पर्छ त ! जहाँसम्म अफेयरको कुरा छ, मैले आफैलाई समय दिन सकिरहेको छैन, अरुलाई कसरी दिन सकुँला । अब जति भेट हुन्छ, त्यसमा हामी हाँस्छौँ, बोल्छौँ, कुराकानी गर्छौँ- त्योचाहिँ सत्य हो । यसमा कुनै बनावटी कुरा छैन ।
उसो भए नभएको कुरा उठाइयो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
म त्यसो भन्दिनँ । भएको कुरालाई गलत तरिकाले ब्याख्या गरियो भन्ने कुरामात्र हो । तपाईं यदि मन्दिरतिर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने र यदि कसैले नकारात्मक सोचले \_'साला हेर्दै चोरजस्तो छ, मन्दिर जाँदैछ\_' भन्नुहोला र अर्को सकारात्मक सोच भएको व्यक्तिले हेर्‍यो भने \_'हिजोआज मन्दिर जानेको कमी छैन\_' पनि भन्नुहोला । अब यो तपाईंको सोचमा भरपर्छ कि एउटा सम्बन्धलाई तपाईंहरुले कसरी हेर्ने !
तर यो कुरा त हो नि, तपाईंहरुको केमेस्ट्री फिल्मभित्र र बाहिर दुबैतिर मिल्छ । होइन ?
पर्दाबाहिर मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा त तपाईं घण्टौँ बसेर कुरा गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । जब तपाईं साता १० दिन सँगै बस्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ अनि अगाडि बसिरहेको व्यक्तिसँगको केमेस्ट्री मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोच्न सकिन्छ । अब जाबो आधा घण्टा भेट हुन्छ, त्यतिबेला तपाईंले केमेस्ट्री अध्ययन गर्ने समय कहाँ पाउनुहुन्छ ? त्यतिबेला केही सीमित गफ हुन्छन् र हामी रमाइलोचाहिँ गर्छौं । अब त्यसलाई तपाईं केमेस्ट्री मिलेको भन्नुहुन्छ भने होला पनि ! सायद त्यही देखेर हामीबीच अफेयर चल्यो भनेर कुरा उठेको हुनसक्छ ।
फिल्म \_'माया त माया हो\_' चलाउन यसका निर्माता विनोद अर्यालले यो हल्ला चलाए भन्ने कुरा पनि बजारमा गर्माएको छ नि ?
हल्लाले गर्दा फिल्म चले त धेरै राम्रो हुन्थ्यो । एउटा नयाँ निर्माताले अर्को फिल्म बनाउने अवसर पाउँथ्यो । तर, फिल्म हल्लाले भन्दा पनि विषयवस्तु र दर्शकको दृष्टिकोणले चल्छ । जाबो फिल्म चलाउनकै लागि उहाँले यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा मलाई बिल्कुलै लाग्दैन ।
तपाईं जहिले पनि फुर्सदका क्षणमा आध्यात्मिक कुरा गर्नुहुन्छ नि ?
हो, यो मेरो रुचिको विषय हो । जब तपाईं अरुका बारेमा सोच्न थाल्नुहुन्छ, त्यो स्थिति आध्यात्म हो । भगवान, मुक्ति र मार्गका कुरामात्र आध्यात्म होइनन् । यदि मैले कसैलाई कुनै एउटा सानो कामले खुसी पार्न सकेँ भने त्यो अवस्था र क्षण आध्यात्मको क्षण हो । मान्छे जन्मँदा केही ल्याएको हुँदैन र मर्दा केही लैजाँदैन तर म यो कुरालाई मान्दिनँ । मान्छे खाली हात जन्मन्छ र मर्ने बेलामा धेरैथोक लिएर जान्छ । त्यो धेरैथोकचाहिँ मान्छेको अनुभव हो र जब अनुभव लिएर मान्छे मर्छ, ऊ अर्को जन्मको तयारी गर्छ । जुन इच्छा यो जन्ममा पूरा गर्न पाएन, अर्को जन्ममा उसले त्यसैको खोजी गर्छ । जब अनेकौँ जन्म पार गरेर आफ्ना अनेकौँ अतृप्त इच्छा पूर्ति गरेर मान्छे जन्मन्छ, धनी हुन्छ । तपाईंले अहिलेसम्म कहिल्यै सुन्नुभएको छ कि बुद्ध भिखारीको घरमा जन्मिएका थिए ? अहँ । धेरैजसो महान् व्यक्तिहरु उच्च घरानामा जन्मिएका थिए, जहाँ उनीहरुका सबै इच्छा पूरा भइसकेपछि ती सबै कुरा त्यागेर उनीहरु जोगी हुन तयार भए । त्यहाँबाट गौतम बुद्ध जन्मिन्छन्, महावीर जन्मन्छन् । तर भिखारीको घरमा गौतम बुद्ध जन्मन किन गाह्रो हुन्छ भने अनेकौँ जुनीसम्म पनि एउटा गरिबका लाखौँ इच्छाहरु पूरा हुन बाँकी नै रहन्छन् र जब सबै इच्छा पूरा हुन्छन्, ऊ राम्रो भाग्य लिएर जन्मन्छ ।
उसो भए तपाईं भाग्यवादी हो ?
हेर्नुस्, हिन्दू धर्मको सबैभन्दा खराब तत्व भनेको भाग्यवादी बनाइदिनु हो । मचाहिँ भाग्यवादीको विरोधी हो । हामीले माथितिर हेरेर सधैँ चन्द्र भगवान् भनेर ढोग्यौँ र कहिल्यै त्यसको वास्तविकता जान्ने प्रयास गरेनौँ । विदेशीहरुले त्यसैको खोजिनिती गरे, त्यहाँ पुगेर आइसके । हामीले किन त्यस्तो गर्न सकेनौँ ? मुख्य कुरा सबै कुरा भगवानले गरिदिन्छन् भनेर हो, जे कुरामा पनि चित्त बुझाएर हो । हामीले भोलिको काम आज र आजको काम अहिल्यै गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार सिकेनौँ । त्यही भएर हामी पछि पर्‍यौँ । सबै कुरा लेखिएरै ल्याएको हुन्छ भनेर हामीले सबै काम भाग्यकै जिम्मामा दियौँ । यसले गर्दा पछाडि पर्‍यौँ । म आध्यात्ममा रुचि राख्ने व्यक्ति भए पनि भौतिकवादी हुँ किनभने भौतिकताले मान्छेलाई धेरैथोक दिएको छ । म प्लेनमा एकैछिनमा सयौँ किलोमिटर यात्रा गर्नसक्छु । यो घडीले मलाई समय बताइरहेको छ- म किन घामको कोण हेरेर समय नापिरहूँ ? तर, म यही सब थोक हो पनि भन्दिनँ । तर हाम्रो धर्मको केही ब्याख्या गलत भएका छन् ।
nikhil.jpg (375.89 kB, 790x1109 - viewed 770 times.)